Real Madrid oo xiriir la sameesay Antonio Conte, muxuuse ka yiri macalinka reer Talyaaniga xiisaha kaga yimid kooxda Los Blancos – Gool FM
(Real Madrid) 18 Okt 2018. Sida laga helayo wararka ka imaanaya gudaha dalka Talyaaniga kooxda Real Madrid ayaa xiriir la sameesay macalinkii hore Chelsea ee reer Talyaani Antonio Conte, waxayna doonayaan inay sameeyaan saxiixiisa.
Wargeysla “Corriere dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Antonio Conte uu yahay musharaxa ugu cad cad uu doonayo madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez inuu lasoo saxiixdo si uu u noqdo badalka tabababe Julen Lopetegui.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Antonio Conte uu heshiis hordhac ah la gaaray maamulka kooxda Real Madrid, wuxuuna ku wargaliyay inuu diyaar u yahay la wareegida shaqada garoonka Santiago Bernabéu.
Real Madrid ayaa xaalad adag ee dhanka gooldhalinta, waxaana gool ay dhaliyaan ugu dambeesay 22-kii bishii September kulankii ay ku garaaceen kooxda Espanyol horyaalka La Liga, kadib wax guul ah ma aysan gaarin 3-dii kulan lasoo dhaafay ay kasoo ciyaareen horyaalka La Liga.
Antonio Conte ayaa laga fasaxay kooxda Chelsea xagaagii lasoo dhaafay kadib markii maamulka Blues ay go’aansadeen in ay lasoo saxiixdaan tababare Maurizio Sarri.
Man United oo Heshiis 5-sano ah ku abaal marisay Luke Shaw